musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » COVID-19 Kuzviuraya Kuzvidzivirira kwaAmai neMwanakomana
Health News • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now • Akasiyana Nhau
COVID-19 kuzviuraya kwakatadziswa - pikicha neruremekedzo rwePattaya Mail
MuPattaya, Thailand, kuzviuraya kweCOVID-19 kwakadzivirirwa apo mukadzi akamiswa kuzviuraya iye nemwanakomana wake mudiki nekuda kwemamiriro avo ekupererwa akakonzerwa neCOVID-19.
Mumwe mukadzi ane makore makumi matatu nemashanu akanzi Dao, chizvarwa cheLaotian, uyo aichema nemwanakomana wake wemakore manomwe kunze kweTuanthong muPong Subdistrict akagadzirira kuzviuraya COVID-35.
Boka revakadzi rakavaona vese vachichema, uye Dao akavaudza kuti ainanga kuMabprachan Reservoir kunonyudza vese vari vaviri.
Akanongedzera kune rimwe zano rekutyaira pamberi petiraki-nemavhiri 18 pamabhasikoro avo.
Murume waDao ane makore makumi mashanu nerimwe, Krit Banjong, ari kushanda semuchengeti, zvisinei, akarasikirwa nebasa rake mune yechitatu wave yeCOVID-51 nekuda kwekudzingwa basa. Vati havana mari yakakwana yekubhadhara rendi kana yekutenga chikafu kana mvura yekunwa.
Sabhuku wemusha Pong Moo 4Ekachai Eimreung, akasvika panzvimbo yeSoi Mabprachan Lang 3 kuti avape chikafu uye 500 baht kuti vazvitore husiku ihwohwo nechivimbiso chekutaura nemuridzi wemba nezvekumisa kwenguva pfupi kubhadharwa kwemaroja emhuri. Muridzi wemba akabvuma kuvabvumidza kunonotsa rendi pari zvino.
Mumwe wevakadzi kubva muboka akange amuona achichema akasvika kuimba yemhuri neshamwari ndokumupa chikafu, zvinodiwa, nemari kuna Dao uyo akavimbisa kuti aisazoedza zvakare kuzvikuvadza iye kana mwanakomana wake.